News Feed Archives | Page 32 of 41 | Frontier Myanmar
စစ်တပ်ထုတ်ကုန်များသပိတ်မှောက်ခံရမှုကို ပြိုင်ဘက်ဘီယာများ အခွင့်ကောင်းမယူနိုင်သေး
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်ချက်အချို့ကြောင့် စစ်တပ်ထုတ်ဘီယာများ ရောင်းအားကျဆင်းနေမှုကို ပြိုင်ဘက်ဘီယာကုမ္ပဏီများက အခွင့်ကောင်းမယူနိုင်ကြသေးပေ။
တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့ မိသားစုဝင်တွေကို ဓားစားခံဖမ်းဆီးမှု
တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကို မဖမ်းမိသောအခါ စစ်ကောင်စီသည် ၎င်းတို့၏မိသားစုဝင်များကို ဖမ်းဆီးပြီး အချို့ကိုမူ တရားမစွဲဆိုဘဲ ကာလကြာရှည် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။
လုပ်ကြံအွန်လိုင်းသတင်းများဖြင့် သွေးခွဲရန် စစ်တပ်ထောက်ခံသူများကြိုးပမ်းနေ
စစ်တပ်ထောက်ခံသူများက အွန်လိုင်းသတင်းတု၊ သတင်းမှားများဖြန့်ချိ၍ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအကြား သွေးခွဲရန် လှုံ့ဆော်နေသည်။
စစ်ကောင်စီ၏ ရွေးကောက်ပွဲအစီအစဉ်ကို အမေရိကန်ပယ်ချ၊ ဖိအားပေးဖို့ အာဆီယံကိုတိုက်တွန်း
၂၀၂၃နှစ်လယ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်မည်ဆိုသည့် စစ်တပ်၏ အစီအစဉ်ကို အမေရိကန်အစိုးရက ပယ်ချလိုက်ပြီး ပိုမိုဖိအားပေးရန် အာဆီယံအဖွဲ့ကို တိုက်တွန်းလိုက်သည်။
ဒေါ်လာသန်းချီတန် မြေကွက်များကို စီမံနေသည့် MICA ၏ လုပ်ငန်းများကို ရပ်ဆိုင်းတော့မှာလား
နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာ ၇ ဉာဏ်လှိုင်လင်း ရေးသားသည်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အစိုးရလက်ထက်က ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး အစိုးရပိုင် မြေဧကများစွာကို ငှားရမ်းစီမံခန့်ခွဲခွင့် ရထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတကာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အေဂျင်စီ (မိုက်ကာ/MICA) ရဲ့ လုပ်ငန်းများကို ရပ်ဆိုင်းဖို့အတွက် စဉ်းစားနေတယ်လို့ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သူက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။.
လွှတ်တော်တွင်းက အဆိုတင်သွင်းခြင်း ပဋိပက္ခ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်အပါအဝင် NLDရဲ့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်အချို့က ပါတီဝင်အမတ်တွေကို ခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး အစိုးရကို အကြပ်အတည်းတွေ့အောင် မလုပ်ဖို့ မှာကြားထားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေလည်း ပေါ်ထွက်ခဲ့တာမို့ အခုလို အဆိုတွေ တင်ခွင့်မရတာအပေါ် သံသယဝင်နေကြတဲ့သူတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ ဉာဏ်လှိုင်လင်း ရေးသားသည်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော်အတွင်းမှာ အရေးကြီးအဆို ပယ်ချခံရမှုတွေ ခပ်စိပ်စိပ် ဖြစ်လာနေပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့.
ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်နေမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး အစိုးရ၏အဖြေကို လွှတ်တော်ဘဝင်မကျ
နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၆ ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ် ကျင့်သုံးနေသည်ဖြစ်၍ ရောင်းလိုအားနှင့် ဝယ်လိုအားပေါ်မူတည်ကာ ကြီးမြင့်လာသော ကုန်ဈေးနှုန်းများကို အစိုးရက တိုက်ရိုက် ထိန်းချုပ်မည်မဟုတ်ဘဲ ထိန်းညှိခြင်းကိုသာ ဆောင်ရွက်မည်ဟု အစိုးရက လွှတ်တော်တွင် ဖြေကြားခဲ့မှုကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်က ဘဝင်မကျဖြစ်ခဲ့သည်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်က ဝန်ကြီးဌာန အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်အချိန်တွင် သက်ဆိုင်ရာ.